2020 ခုနှစ်တွင် Plet ၏နွေရာသီတိုးချဲ့
20-08-15 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
SPS အမှတ်တံဆိပ်နှင့် Japan Bando တံဆိပ်တို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် Shenzhen Touchscreen ပြပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်
19-12-04 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၂၃ ရက်အထိတရုတ်နိုင်ငံ၏ထိတွေ့မှုမျက်နှာပြင်နယ်ပယ်ရှိရှန်ကျန်း Full Touch နှင့် Display Exhibition ကို Shenzhen Convention and Exhibition Centre တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စတင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းထိတွေ့မှုပြသခြင်းလုပ်ငန်း၏ရာသီဥတုအခြေအနေအရဤပြပွဲသည် ...
SPS ရာဘာခြစ်ခြင်းနှင့်ဘန်ဒိုခြစ်ရာများသည် 2019 အာရှပစိဖိတ်ကွန်ယက်ပုံနှိပ်ခြင်းပြပွဲတွင်အောင်မြင်စွာပါဝင်ခဲ့သည်
ကြွက်ကဲ့သို့ကြွေများ, အတိတ်ရောင်းအားရက်စွဲ: Lancaster ကောင်တီစားသောက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း: ဇွန်လ 7, 2019 | စားသောက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း
19-06-19 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
Pennsylvania ပြည်နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အခြားအစားအစာကိုင်တွယ်သူများအတွက်အန္တရာယ်အခြေပြုစစ်ဆေးခြင်းကိုအစီရင်ခံသည်။ Liberty on Duke, ၁၀၀၂ N. Duke St. , မေလ ၁၃ ရက်။ အလင်းရောင်သည်လမ်းလျှောက်နေသောအအေးခံကိရိယာတွင်အကာအကွယ်မပေးပါ။ ရေခဲစက် deflector plate ပေါ်တွင်အနက်ရောင်စိုထိုင်းသောအကျန်များ၊ cl ...
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အခွင့်အလမ်းများ၊ ကစားသမားများ၊ ဒေသများအလိုက် Global Scrubber-ခြောက်သွေ့စျေး (၂၀၁၈-၂၀၂၃)
Worldwide Scrubber-Dryers Market သည်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေသောသုတေသနအစီရင်ခံစာတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Scrubber-Dryers 2018 ၏ရှုထောင့်တိုင်းကိုခြုံငုံ။ Scrubber-Dryers စျေးကွက်တိုးတက်မှုဒြပ်စင်များ၊ ဖြန့်ဖြူး။ ...
19-06-12 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
Glass မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဓိကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သောဖန်ခွက်ပန်းကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖန်ခွက်ကွန်တိန်နာကို သုံး၍ ဖန်သားပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဖန်အသုံးပြုခြင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပြီးမျက်မှောက်ခေတ်မျက်မှောက်ခေတ်၌ပင်ဖန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သည်။ လက်ရှိဘဏ္oာရေးအကျပ်အတည်းကြောင့်ဖြစ်
18-03-23 ​​အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
မည်သို့ပင်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းအမျိုးအစား၏, ထိုကွက်အသုံးမပြုခင်သန့်စင်ခြင်းနှင့် degreased ရမည်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ degreasing အလုပ်ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါလျှင်, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် delaminated သို့မဟုတ်ဖကျြဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။ ပိုက်ကွန်အထည်အချိန်အတွက်သန့်ရှင်းသည်မဟုတ်ပါကဗလုံးဗထွေးမည်ဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်လိမ့်မည် ...
SPS-FGB Fiber Glass ကိုဘုတ်အဖွဲ့ Squeegee
2015 ခုနှစ်တွင်ခြုံငုံစီးပွားရေးကျဆင်းမှုပေမယ့်, ဒါပေမယ့်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းနေဆဲအလျင်အမြန်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပညတျ heig သိမ်းယူဖို့မျှော်လင့်, ထုတ်ကုန် optimization, အရင်းအမြစ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အခြားအသွင်ပြောင်းမှတဆင့်ကိုလည်းယခုနှစ်အတွင်းအများစုမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီများသည်ကောင်းသောရလဒ်များကိုအောင်မြင် ...
1. လေယာဉ်ပြားမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်အကျင့်ကိုကျင့် - screen ပရင်တာမူအရမိတ်ဆက်စကားအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သံသရာ program ကိုအလုပ်မလုပ် 1 လေယာဉ်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်။ ပြားချပ်ချပ် halftone မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား monochromatic ကို semi-automatic မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်၏အမှု၌၎င်း၏အလုပ်သံသရာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်: နို့တိုက်ကျွေးရေး→ positioning ကို→ကျဆုံးခြင်း ...
ပုံနှိပ်ကွန်ယက်ကိုမိတ်ဆက်နှင့်၎င်း၏ function ကို
ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အစက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ အစက်အဆိုပါ gradations, အဆင့်ဆင့်, နှင့်ပုံရိပ်၏အရောင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ မဆိုထင်ဟပ်သို့မဟုတ် transmission ကိုတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ် Bloom သေံဖွဲ့စည်းရန်ခြယ်ပစ္စည်းအမှုန်သို့မဟုတ်ငွေအမှုန်၏ဖွင့်ထားကြပါတယ်။ ဤသည် blooming သေံနှင့်အလွှာမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးသို့မဟုတ်အခြား meth ရမည်ဖြစ်သည် ...
မျက်နှာပြင်ပရင်တာဝယ်ယူရန်တဲ့သူဖောက်သည်များအဘို့, အဘယ်အရာကိုသူတို့အကြောင်းကိုအများဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြ၏ဝယ်ယူစက်တွေအမြတ်အစွန်းရှိနိုင်ပါသည်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာကို manual စစ်ဆင်ရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကို semi-automatic သို့မဟုတ်အပြည့်အဝ-အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပရင်တာကအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးရှိသည်: 1. ပထမဦးစွာအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒုတိယအ့ ...
2017 ရှန်ကျန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်ပြပွဲ
အဆိုပါ 2017 ရှန်ကျန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်ပြပွဲဟာရှန်ကျန်းကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်ပြပွဲစင်တာ၌နိုဝင်ဘာလ 24 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ PLET ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဘုတ်အဖွဲ့ squeegee, နဲ့ automatic squeegee grinder သကဲ့သို့, FGB ဖိုက်ဘာမှန်ဘုတ်အဖွဲ့ squeegee ပြ။ SPS မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ် squeegee သုံးအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်: ...
မေလ 12, 2017 တွင်ဒုတိယ screen ကိုပုံနှိပ်ပြပွဲဟိုချီမင်းစီးတီး, ဗီယက်နမ်အတွက်ဆိုင်ဂုံပြပွဲ Center မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ SPS အမှတ်တံဆိပ် squeegee ပြပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. မှာ AS တစ်ဖက်သတ်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ squeegee စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ squeegee AS ၏အားသာချက်များ: တစ်ဖက်သတ်ထောက်ခံမှုမီတာ 1 ...
2016 Semiconductor နှင့် Microelectronics ပြပွဲ
Plet ရက်ချိန်း SPS Squeegee အရောင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆက်သွယ်ရေးစဉ်အတွင်းမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၏နည်းပညာများကိုနားလည်နှင့်ဒဏ်ငွေမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစဉ်များဖလှယ်ဖို့ဇန်နဝါရီလ 18, 2016 ရက်တွင်တိုကျိုမြို့ရှိသည့် Big မျက်မှောက်မှာကျင်းပတဲ့ Semiconductor နှင့် Microelectronics ပြပွဲသွားရောက်ရန်, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ် PR ...
SPS Squeegee 2015 CSGIA ပြပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့
အောက်တိုဘာလ 21, 2015 တွင်ရှန်ဟိုင်းနယူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ၌, SPS အဆိုပါ FGB ဖိုင်ဘာဖန်ဘုတ်အဖွဲ့ squeegee နှင့်ကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည့် M-type ကိုအရည်ပျော်ပစ္စည်း-ခံနိုင်ရည် wear-ခံနိုင်ရည်ခြစ်, စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ SPS အမှတ်တံဆိပ် squeegee ဂျပန် polyurethane squeegee ၏ လုပ်. သို့လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ် ...